မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဝန်ထမ်း ဖြစ်သွားသည့် အင်နီယေစတာ
12/29/2013 02:15:00 AM celebrity-news
ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ် ကစားသမား အန်းဒရက်စ် အင်နီယေစတာ အနေဖြင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းသမားအဖြစ် အလုပ်ပြောင်းသွားကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အင်နီယေစတာသည် ဘာစီလိုနာနှင့် မကြာသေးမီကမှ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ထားသူ ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ၎င်းသည် ဘာစီလိုနာမြို့ရှိ ဖုန်းအရောင်းဆိုင် တစ်ခုတွင် ဖုန်းဝင်ရောက်ပေးနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ဖုန်းလာဝယ်သူများသည် ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးကြယ်ပွင့် သန်းကြွယ်သူဌေးကို ဖုန်းအရောင်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် တွေ့မြင်ရသည့်အခါ အလွန်အံ့ဩသွားကြသည်။ အင်နီယေစတာကမူ ၎င်းလုပ်ဆောင်စရာ ရှိသမျှကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပင် လုပ်ဆောင်ပြကာ ဖုန်းဝယ်ယူသူများကို အကြံပြု သွန်သင်ပေးခဲ့သည်။
ယင်းအစီအစဉ် တစ်ခုလုံးသည် Sony၏ ကြော်ငြာကဏ္ဍ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Sonyသည် အသက်(၂၉)နှစ်ရှိ အင်နီယေစတာကို ၎င်းတို့၏ စမတ်ဖုန်းများအတွက် ပုံရိပ်မြှင့်တင်ပေးမည့် သံတမန်အဖြစ် ငှားရမ်း ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Sony၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ်တွင် အင်နီယေစတာက ပါဝင် ကူညီခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်နီယေစတာသည် ဘာစီလိုနာနှင့် (၂၀၁၈)ခုနှစ်ထိ သက်တမ်းတိုးမည့် စာချုပ်တစ်ရပ်ကို ယခုလအတွင်းကမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသူလည်း ဖြစ်သည်။
၉၆၉-လှုပ်ရှားမှုသာ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်နိုင်မည်
12/29/2013 02:00:00 AM Myanmar-news
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓွန့်ရှည်ဖို့ ၉၆၉-ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ မိမိအိမ်မှာ၊ မိမိဆိုင်မှာ၊ မိမိကားမှာ၊ မိမိရုံးမှာ ၉၆၉ တံဆိပ်ကို ရဲရဲကပ်ပြီး မိမိတို့ဟာ အမျိုး-ဘာသာ-သာသနာကို စောင့်ရှောက်သူတွေဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ခံယူကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒါကို မာဂျေ လုံးဝထောက်ခံတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၉၆၉ ဆိုတာ ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ်တော်ခြောက်ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါး ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ သားဖြစ်သူက “အဖေ ၉၆၉ ဆိုတာဘာလဲ”လို့ မေးကတည်းက ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်သွားပြီဆိုတာ မာဂျေ သိလိုက်တယ်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုဟာ သူများဘာသာကို တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ မိမိအမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့သာ ဖြစ်တယ်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုဟာ သူများဘာသာကို တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။
မိမိအမျိုးကို ချစ်ဖို့၊ မိမိဘာသာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ မိမိအမျိုးသား စီးပွားရေးကို အားပေးဖို့ဆိုတဲ့ ဝံသာနုရက္ခိတတရားပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု ကြီးထွားလာမှာစိုးလို့ ပြည်ပက ဒေါ်လာစား မီဒီယာတွေကလည်း ၉၆၉ဟာ နာဇီလက်သစ်ဝါဒဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲလာကြတယ်။ အဲဒီစွပ်စွဲချက်ကို မာဂျေ လုံးဝရှုတ်ချတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကလည်း ကောလာဟာလတွေ ထုတ်လွှင့်လာကြတယ်။ အိမ်မှာ သားဖြစ်သူက သူ့ရဲ့ကားမှာ ၉၆၉ စတစ်ကာကပ်တာကို အမေလုပ်သူက ခွာပစ်တယ်။
အကြောင်းပြတာကတော့ “နင် အဖမ်း ခံရလိမ့်မယ်”တဲ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ၉၆၉ စတစ်ကာဝေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို လူမျိုးခြားတွေက ဓားနဲ့ထိုးတယ် ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ ၉၆၉ စတစ်ကာ ရိုက်ပေးတဲ့စက်ကို ဘာသာခြားတွေက ခြိမ်းခြောက်လို့ နောက်ထပ်မရိုက်ရဲပါဘူး ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ ဒါဟာ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကို ဘာသာခြားတွေ ဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ။ သူတို့ဆိုင်တွေ အားလုံးမှာ သူတို့ဘာသာ အမှတ်တံဆိပ် ကပ်ရဲချိန်မှာ မာဂျေတို့က ဘာလို့ ၉၆၉ စတစ်ကာ မကပ်ရဲရမှာလဲ။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် အတိအလင်း မြွတ်ကြားထားတာရှိတယ်။ အိမ်ရှင်ရဲ့ဘာသာကို ဧည့်သည်က မစော်ကားရဘူး။ လေးစားရမယ်ဆိုတာ။ ၉၆၉ စတစ်ကာဝေလို့ ဖုန်းဆက်ခြိမ်းခြောက်ရင် ဆက်သွယ်ရေးကို တိုင်လို့ရပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးမှာ ဘယ်ဖုန်းကနေ ဘယ်ဖုန်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘာပြောတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်ထားနဲ့ အသံခွေတွေ ရှိပါတယ်။ အရေးယူလို့ ရပါတယ်။
အခုတော့ ကိုယ့်တိုင်ပြည်မှာနေပြီး ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ၉၆၉ တောင် မကပ်ရဲကြရအောင် သတ္တိတွေ နည်းနေကြပြီလား။ သင်္ကြန်းအတွင်း မာဂျေ ခရီးထွက်စဉ်က မြေလတ်မြို့ တစ်မြို့မှာ ၉၆၉ ရေးကစားမဏ္ဍပ်တောင် တွေ့ခဲ့တယ်။ အလွန်ပီတိ ဖြစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့တစ်ခု ပြောပြချင်တယ်။ အတန်တန်တားနေတဲ့ကြားက တပည့်မတစ်ဦး ဘာသာခြားနဲ့ကြိုက်တယ်။ တစ်ရုံးလုံး ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားချိန်မှာ ဘုရားဖူးသွားရမလားဆိုပြီး တစ်ချိန်လုံး ဘာသာခြားက ဖုန်းဆက်နှောက်ယှက်တယ်။ ဘာလို့နှောက်ယှက်သလဲဆိုတော့ သူနဲ့ကြိုက်နေလျက်နဲ့ ဘုရားဖူးလို့တဲ့။ တပည့်မမှာ ဘုရားသာဖူးနေရတယ်။ ဟိုက တစ်ချိန်လုံး နှောက်ယှက်နေလို့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်။ ဘယ်လိုလုပ် ကုသိုလ်ရတော့မှာလဲ။ ကဲ… ဘယ်လောက်တောင် စော်ကားထားသလဲ။
ဒီလိုဖြစ်မှ တပည့်မ အမြင်မှန် ရသွားတယ်။ လူမျိုးခြား အသိုက်အဝန်းထဲ မဝင်ရသေးတာတောင် ဒီလောက်အနိုင်ကျင့်၊ ဗိုလ်ကျနေရင် တကယ်သာ အိမ်ထောင်ရက်သား ပြုခဲ့မိရင် ဒုက္ခဆိုပြီး နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။ မာဂျေ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာမလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဘာသာခြားတွေအတွက် လူကပြား သားဖောက်စက်တွေလို အသုံးတော် ခံနေရတာ ကြာနေပါပြီ။ တချို့ သားသမီးတွေ (အထူးသဖြင့် သမီးတွေ) ကို မိဘတွေက မနိုင်ကြဘူး။ တချို့ကတော့ သားသမီးလုပ်စာကို မှီခိုစားသောက်နေရလို့ မပြောရဲကြတာတွေ ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ကိုယ့်သားသမီးကို မဆုံးမရဲရင်ဖြင့် နောင်တစ်ချိန် အမျိုး-ဘာသာ-သာသနာကွယ်ရင် အဲဒီမိဘတွေမှာပါ တာဝန်ရှိပါတယ်။ လူမျိုးခြားနဲ့ ယူလိုက်တဲ့ သမီးတွေကော ဒီဘဝမှာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာကို ဘယ်မိဘများ မြင်ဖူးပါသလဲ။
မာဂျေရယ်… မင်းပြောသလို မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သမီးတွေ လူမျိုးခြား-ဘာသာခြားနဲ့ယူပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း၊ စိတ် ချမ်းချမ်းသာသာ နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ မိဘများရှိရင် မာဂျေ့ကို ဆက်သွယ်ဗျာ။ ပြန်ပြီး ရေးပေးမယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က ရွှေဒဂုံတောင်ဘက်မုဒ်ဝမှာ တောင်းရမ်းနေတဲ့ မြန်မာမိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဘေးနားမှာလည်း ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့။ ကလေးတွေက ဘာသာခြားရုပ်တွေ။ ဒါနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီး ကားရပ်၊ အလှူငွေနှစ်ရာပေးပြီး “ဒါ နင့်ကလေးတွေလား” မေးကြည့်တော့ “ဟုတ်တယ်”တဲ့။ “နင်က မြန်မာ။ နင်မွေးထားတာလေးတွေက လူမျိုးခြားရုပ်တွေပါလား။ နင့်ယောက်ျားက နင် ဒီလိုတောင်းတာ ခွင့်ပြုသလား”မေးတော့ ကလေးနှစ်ယောက်ရအပြီး သူ့ကို ကလေးတွေနဲ့ ထားခဲ့ပြီး ပစ်သွားလို့တဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာသာခြားယူမိတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သူတောင်းစားဘဝ ရောက်ရတော့တာပဲ။ အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ မိဘသာရှိခဲ့ရင် ဒီလိုတောင်းရမ်း စားသောက်ရတာကိုသာ မြင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ မိဘတွေ သတိကြပ်ကြပ်ပြုကြပါ။
မီးဆိုတာ မလောင်ခင် တားရသတဲ့။ ဖြစ်ပြီးမှ သမီးလည်း ဒုက္ခရောက်၊ မိဘတွေလည်း စိတ်ဆင်းရဲရရင် အားလုံး ရှုံးတာပါပဲ။ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလည်း သတိပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမျိုး- ဘာသာ- သာသနာအရေးကို ကာကွယ်ဖို့ အရေးမှာ မကြောက်ကြပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာက သူများဘာသာကို စော်ကားတဲ့ဘာသာမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ့်အထဲက ပဲ့ပါမသွားအောင်သာ ကာကွယ်တဲ့ဘာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအဓွန့်ရှည်ဖို့ ၉၆၉ ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ မိမိအိမ်မှာ၊ မိမိဆိုင်မှာ၊ မိမိကားမှာ၊ မိမိရုံးမှာ ၉၆၉ တံဆိပ်ကို ရဲရဲကပ်ပြီး မိမိတို့ဟာ အမျိုး-ဘာသာ-သာသာနာကို စောင့်ရှောက်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခံယူကြပါ။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုဟာ ကောက်ရိုးမီးလို ဟုန်းခနဲထပြီး ဟုန်းခနဲပျောက်သွားတာ မဖြစ်စေလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ အမျိုး-ဘာသာ-သာသနာ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း မစွမ်းနိုင်ပါဘူး။ တပ်မတော်လည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဝံသာနုရက္ခိတ စိတ်ကသာ လုပ်နိုင်၊ ကာကွယ်နိုင်မှာမို့လို့ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူအားလုံး ဝိုင်းဝန်းပါဝင်သင့်ကြောင်း ဒီနေရာကနေ နှိုးဆော် လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ။
(ရွှေနိုင်ငံသစ် နေ့စဉ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် မာဂျေက ဒါတွေပြောချင်တယ်ကဏ္ဍမှ ကောက်နုတ်တင်ပြသည်။)
“ထေရဝါဒ မော်ကွန်းဂျာနယ် ၏ စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်.
အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာသစ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပမည်
12/29/2013 01:30:00 AM Myanmar-news
မန္တလေး ၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၃
ရွှေမန္တလော Express မှ ပံ့ပိုး ကူညီကာ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း (မန္တလေး) နှင့် မြန်မာမြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း ( စင်ကာပူ ) တို့ ပူးပေါင်း၍ စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင် ဆောက်လုပ် နေသော နည်းပညာသစ် ဆိုင်ရာ စာတမ်း ဖတ်ပွဲကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ် ၊ ၇၇x၇၈ လမ်းကြား နှင့် ၃၃x၃၄ လမ်းကြား ရတနာပုံဈေး လေးလွှာထပ် ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းရုံးခန်းမ ၌ လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စာတမ်းဖတ်ပွဲ သို့ စိတ်ပါ ၀င်စားသူများ တက်ရောက် နိုင်ပြီး အသေးစိတ် သိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းရုံးသို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်း နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
12/29/2013 01:00:00 AM articles
မြန်မာပြည်မှာ လူအများစု အထင်မှားနေတာ တစ်ခုက အိုင်တီဆိုရင် Programming နဲ့ Networking တို့လောက်ပဲ သိထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ IT ရယ်လို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရင် ပါဝင်လာမယ့် အလုပ်အကိုင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကို Smart.com.mm ရဲ့  နှစ်ကူး လက်ဆောင် အနေနဲ့ ရေးသား မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
"3D Animation and Graphic Design"
3D Animation and Graphic Design ကတော့ ဘာမှ သိပ်ရှင်းပြစရာ မလိုလောက်အောင် အများစု သိရှိပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Graphic and 3D ဆိုရင် ကြော်ငြာလက်ကမ်းစာစောင်တို့ အပေါ် အတွက်၊ ပစ္စည်း ဒီဇိုင်းပုံစံတို့လောက်ပဲ မထင်စေချင်ပါဘူး။ သူက ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ဂိမ်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ပရိုဂရမ်တို့အတွက်ပါ လိုအပ်တဲ့ ပုံ၊ 3D Animation များကိုလည်း ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား - ကုမ္မဏီတစ်ခုရဲ့  Customer service အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်မယ် ဆိုရင် Customer တွေရဲ့  မေးမြန်းမှု၊ တောင်းဆို မှုတွေကို ဖြေကြား ဆောင်ရွက်ပေးရတာလို့ အကြမ်းဖျဉ်းမှတ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ သူက ကုမ္ပဏီ အမျိုးအစားအပေါ်မှာလည်း မူတည် ပါသေး တယ်။ မေးမြန်း တဲ့ မေးခွန်းကလည်း ကုမ္ပဏီအကြောင်း အရာ၊ အော်ဒါ၊ အော်ဒါ အခြေအနေ၊ ပစ္စည်း သတင်းအချက်အလက် နဲ့ အသုံးပြုပုံ အပြင် အခြားသော အကြောင်းအရာများလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အွန်လိုင်းဈေးရောင်း ဈေးဝယ် ကုမ္မဏီမှာ Customer service လုပ်တယ်ဆို ရင် အွန်လိုင်းက အကောင့်ဖွင့်မရတာ တို့၊ အော်ဒါ မှာ နောက်ကျ တာတို့ မေးမြန်း တဲ့အခါ ဖြေကြား၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို အကြမ်းဖျဉ်းနားလည်ထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ နည်းပညာ ကျတဲ့အခက်အခဲတွေ ဖြေရှင်းဖို့ကျ Customer service က အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် Technical Support ဘက်ကို လွဲပြောင်းပေးရတာမို့လို့ အသေးစိတ် သိနေဖို့ မလိုအပ် ပါဘူး။
လိုအပ်ချက် - ကွန်ပြူတာကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့  System အားလုံးကို ခြုံငုံသိထားဖုိ့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အခက်အခဲကိစ္စအတွက် ဘယ်သူတွေ ဖြေရှင်းမယ် ဆိုတာကို တိုက်ရိုက် သတင်းပို့ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား - Data Entry အလုပ်ကို အတော်များများက အိုင်တီအလုပ်လို့ မထင်ခဲ့ကြပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဒါဟာလည်း အိုင်တီအလုပ်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူက အပြင် Offline က စာတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကွန်ပြူတာထဲ ( Electronic format ) အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ရိုက်ထည့် ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - စာရိုက်နှုန်းမြန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အပြင်၊ မြန်မာပြည် မှာဆိုရင် မြန်မာ font အစုံနဲ့ လိုအပ်ချက်အလျောက် အကျွမ်းတဝင် ရှိထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ Microsoft Office တို့လို Office Application များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖုိ့လိုအပ် ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - သူက ပညာအရည်အချင်း လိုအပ်ချက် သိပ်မများပါဘူး။ အဓိကကတော့ စာရိုက်တာ မြန်ဖို့လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား - Database များ ဖန်တီးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရတဲ့ အလုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - Database နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ပညာတွေကို သိထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ Access, FoxPro, MySQL, MySQL, SQL နဲ့ Sybase တို့လို ဟာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Programming နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတဲ့ အလုပ်ပါ။
"Electronic technician or Engineer"
အမျိုးအစား - ကွန်ပြူတာ စနစ်တို့ဆိုတာ အီလက်ထရောနစ် စနစ်အပေါ်မှာ အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း အလုပ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - အခြေခံနဲ့ အဆင့်မြင့် အီလက်ထရောနစ် ဗဟုသုတနဲ့ ပညာရပ်များကို သိရှိ တတ်မြောက် ထားရန်လိုအပ် ပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတာ အိုင်တီ လုပ်ငန်းမှာ အတော်လေး မြင့်တဲ့ ရာထူး အဆင့် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုရင် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်တဲ့ Technician အဆင့်ကို ကျော်လွန်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ အဆင့်အထိကို ရှိပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - မိမိ ရွေးချယ်တဲ့ အိုင်တီ အင်ဂျင်နီယာ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပညာအလျောက် တက္ကသိုလ်တွေ၊ သင်တန်းတွေ တက်ထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
အမျိုးအစား - Freelancer ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အလုပ်အကိုင် အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အိုင်တီ အလုပ်အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Freelance အောက်မှာပဲ အိုင်တီအလုပ်အမျိုးအစား အားလုံးနီးပါး ပြန်အကျုံးဝင်သွားပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - အခြေခံအားဖြင့် အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံး ရှိဖို့ပါပဲ။ Mashable ဝဘ်ဆိုဒ်တည်ထောင်သူဆိုရင် ကွန်ပြူတာတစ်လုံး၊ အင်တာနက်လိုင်း တစ်ခုကြောင့် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု လုပ်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Blogger ဆိုရင် Freelancer ဖြစ်ပါတယ်။ Google Ads တို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လည်း ကြော်ငြာဝင်ငွေ ရပါတယ်။ အခြားသော ဝဘ်ဆိုဒ် များအတွက် ရေး သားပေးခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ဝဘ်ဆိုဒ်ရေး ဆွဲခြင်း ပရောဂျက် တစ်ခုလုံးကို ကိုင်တွယ်ပေးတာကလည်း freelance ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးအစားအလိုက် Programming လည်းလိုကောင်းလိုပါ လိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား - Hardware ဒီဇိုင်နာ၊ ဆားကဒ်ဒီဇိုင်း၊ embedded systems, firmware အစရှိသဖြင့် အလုပ်နဲ့ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ Hardware ပစ္စည်း တစ်စုံလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖန်တီးရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - သူက အီလက်ထရောနစ်၊ ဆားကစ်၊ firmware, ဒီဇိုင်း ပညာရပ်များကို တတ်မြောက် ထားရန် လိုအပ် ပါတယ်။ ဒီတော့ အင်ဂျင်နီယာ Level နဲ့ သိပ်မကွာ ပါဘူး။
"Networking or System Administrator"
အမျိုးအစား - ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ကနေ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အင်တာနက် ကွန်ရက်စနစ်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းဟာ Networking ဖြစ်ပြီး ယင်းစနစ်ကို ဖန်တီး၊ ထိန်းချုပ်တဲ့အလုပ်က System Administrator ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မြန်မာပြည်မှာလည်း လူသိများတဲ့ အလုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - CCNA, MCSE အစရှိသဖြင့် စာမေးပွဲများ ကို ဖြေကြားအောင်မြင်ထားဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ တကယ်လည်း တတ်မြောက်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
"Programmer or Software Developer"
ဒီအလုပ်ကိုလည်း ပြောပြစရာမလိုလောက်အောင် တော်တော်များများ သိကြမှာပါ။ Programing အလုပ်၊ Software developing အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း မြန်မာပြည်မှာ အင်မတန် များပြား ပါတယ်။
"Quality Assurance (QA), System Analyst or Tester"
အမျိုးအစား - ကုမ္ပဏီထုတ် အိုင်တီ ထုတ်ကုန်တွေကို အရည်အသွေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အသေးစိတ် လေ့လာရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး စစ်ဆေးရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - ကွန်ပြူတာ နဲ့ ပက်သက်လို့အခြေခံ ဗဟုသုတ၊ ပညာအပြင်၊ ကိုယ် လုပ်ကိုင်ပေးနေရတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ပက်သက်လို့လည်း သိထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
"Repair and Fix"
အမျိုးအစား - ကွန်ပြူတာ ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - ကွန်ပြူတာ ဖြုတ်ခြင်း၊ တပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းကို သေချာ တတ်မြောက်ထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
အမျိုးအစား - ကွန်ပြူတာ၊ အိုင်တီနဲ့ ဆက်စပ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ကို ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - လူမှုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ဖုိ့ လိုအပ် ပါတယ်။ မိမိရောင်းချမယ့် ပစ္စည်းရဲ့  အကြောင်းကိုလည်း အကြမ်းဖျဉ်းသိထားဖို့ လိုအပ် ပါသေးတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ရေးဆွဲပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုရင်လည်း ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ရေးဆွဲပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် များကို ဝယ်ယူသူ နားလည်လောက်တဲ့အထိ ရှင်းပြပေးဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ Sale အလုပ်က ဒီထက်ပိုကျယ်ပြန့် ပါတယ်။ ဥပမာ Facebook မှာ Sale Manager ရာထူးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရသူ တစ်ဦးဟာ ဆိုရင် မာကဲတင်း၊ စီးပွားရေး၊ MBA အပြင် အခြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့ အကြုံ များစွာ လိုအပ် ပါတယ်။
အမျိုးအစား - မိမိကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအတွက် ဈေးကွက်နယ်ပယ်ချဲ့ ထွင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မာကဲတင်း အလုပ်က ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ အတွက်ဆိုပြီးတော့ ကွဲပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Online နဲ့ Offline ဆိုပြီးတော့လဲ ကွဲပါသေးတယ်။ Online ဆိုရင် ဘယ်ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ Banner ထည့်ရမယ်။ Search Engine မှာရှာလို့လွယ်အောင် ဘယ်လို Optimize လုပ်ရမယ်။ ဆိုဒ်အားလုံးနဲ့ ဘယ်လို Link ချိတ်ရမယ် အစရှိသဖြင့် ဗျူဟာဆွဲတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Offline ကတော့ အားလုံး သိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကြော်ငြာ ပိုစတာကစလို့၊ TVC ဖန်တီးတဲ့အထိ အလုပ်က အစားစား ရှိသွား နိုင် ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - မာကဲတင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ certificate တွေအပြင်၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဗဟုသုတ၊ ပညာများ ကြွယ်ဝတတ်မြောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Search Engine Optimization ကိုသေချာ သိရှိတတ်မြောက်ထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
"Technicial Support ( Technician or Help Desk )"
အမျိုးအစား - ကုမ္ပဏီတစ်ခု လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ကွန်ပြူတာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ ပက်သက်လုိ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ နည်းပညာကျကျ ဖြေရှင်းပေးရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - ကွန်ပြူတာ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ အကြောင်းများကို သိရှိနားလည်ပြီး ကိုယ်တာဝန် ယူပေးရမယ့် အပိုင်းမှာ ပိုပြီးတတ်ထားဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ ဥပမာ - ကိုယ်က Windows OS တင်ခြင်း၊ ချခြင်း နဲ့ အချက်အလက် အကူးအပြောင်း အတွက် တာဝန်ယူပေးရသူဆိုရင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းရဲ့  လိုအပ်ချက်အလျောက် အခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါ ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
အမျိုးအစား - ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများရဲ့  အသုံးပြုပုံ လမ်းညွန်၊ အချက်အလက် များကို ရေးသား ပေးရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မိုဘိုင်းဖုန်း ထဲမှာပါတဲ့ အသုံးပြုပုံလမ်းညွန်တို့၊ အချက်အလက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတကာမှာ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ်အမျိုးအစား ဖြစ် ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအလျောက် ကြော်ငြာရန်အတွက်ကော၊ ကုန်ပစ္စည်းမှာ ထည့်သွင်း ရန် အတွက်ရော အစရှိသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးသားလို့ Online, Offline ဖြန့်ချိ ကြပါတယယ်။
လိုအပ်ချက် - ကွန်ပြူတာ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာအခြေခံ ဗဟုသုတများ ကြွယ်ဝရန် လိုအပ်ပြီး စာရေးသားခြင်း အတတ်ပညာကို သေချာတတ်မြောက်ထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ၂ မျိုးစလုံးတတ်မြောက်ထားရင် အနာဂတ်မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ကောင်းများ ပိုမို ရရှိ နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား - system, hardware ပစ္စည်း၊ software ပရိုဂရမ်များရဲ့  လုံခြုံးရေးအတွက် တာဝန် ရှိတဲ့ အလုပ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - အမျိုးအစားပေါ်မူတည် ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလုံခြုံရေး အတွက်ဆိုရင် Programming တက်မြောက်ရုံမက၊ စနစ်တစ်ခုလုံး အလုပ်လုပ်ပုံ flow ကို သိရှိ၊ ကိုင်တွယ် တတ်ဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ expert level ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမှာ လစာအတော်လေးရတဲ့ အလုပ်အမျိုးအစားပါပဲ။
အမျိုးအစား - Web Page တွေကိုရေးဆွဲပေးရတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - အခြေခံအားဖြင့် HTML, CSS နဲ့ Photoshop တို့ကို တတ်မြောက်ထားရန် လိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ CGI, CSS, Flash, FTP, Linux, Perl, PHP, RSS, SSI, Unix, XHTML တို့ကို သိထားတတ်ထားဖို့လိုအပ် ပါတယ်။
အမျိုးအစား - ဒါကတော့ အိုင်တီနယ်ပယ်က လျှောက်လမ်းသူ အများစု ရဲ့  ပန်းတိုင် တစ်ခုပဲ ထင်ပါတယ်။ အိုင်တီနဲ့ ဆက်စပ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက် - စီးပွာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့ ပညာရပ်အပြင်၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ အိုင်တီ ဆက်စပ် ပညာရပ်၊ ဗဟုသုတ များကိုလည်း အကြမ်းဖျဉ်းသိရှိထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထုတ်လုပ် ရောင်းချ စီးပွားရေး လုပ်မယ့် ပစ္စည်းကိုကျတော့ သေချာ သိရှိ နားလည် ထားဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါဖော်ပြချက်ထဲမှာ Mobile and Telecommunication Industry ကိုမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးဟာလည်း အိုင်တီဆက်စက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော ချန်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အမျိုးအစား၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ် အမျိုးအစားတွေ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ ဥပမာ Content Developing လို အလုပ်မျိုးဟာဆိုရင်လည်း အိုင်တီဆက်စပ် ကဏ္ဍတွေ အားလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော အလုပ်ပေါင်းများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် အိုင်တီဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘယ်လို အလုပ် အမျိုးစားတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို သိရှိပြီလို့ မျော်လင့် ပါတယ်။
ရိုးရာအားကစားနည်းဖြစ်သော ခြင်းလုံးခတ်ကစားနည်းကို အာရှထိုးဖောက်နိုင်ရန် အာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရ
12/29/2013 12:30:00 AM sport-news
ရိုးရာ အားကစားနည်းဖြစ်သော ခြင်းလုံးအားကစားနည်းကို အရှေ့တောင်အာရှမှ အာရှနိုင်ငံများအထိ ထိုးဖောက်နိုင်ရန်အတွက် အာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က နေပြည်တော်သင်္ဂဟဟော်တယ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥက္ကဌ ရာထူးကို ခန့်အပ်ခံရကြောင်း အာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးစိုးနိုင်ထံမှ သိရသည်။
“ရိုးရာအားကစားနည်းကို နိုင်ငံတကာက ပါဝင်လာဖို့ရာအတွက် ဒီအာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းတာပါ။ အာဆီယံ ၁၁ နိုင်ငံအပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ တို့ပါဝင်တဲ့ ၁၃ နိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်တွေက ရွေးချယ်လိုက်လို့ အန်လ်ကယ်က ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာပါ”ဟု ဥက္ကဌ ဦးစိုးနိုင်က ပြောသည်။
အာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ဦးစိုးနိုင်သည် ၂၀၁၀ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အေးအေးခိုင်ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူမှာ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးကျော်ဇင်မိုးဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
ယင်းအာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အားကစားဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခြားနိုင်ငံများမှ အားကစားဥက္ကဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များက တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ အာဆီယံ ၁၁ နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အာရှခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး နေရာကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ဒုဥက္ကဌနေရာကိုမူ စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှ တာဝန်ယူရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသော ၂၇ ကြိမ်မြောက်ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံးကိုလည်း အားကစားနည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခတ်ကစားမည့် နိုင်ငံများသို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ သွားရောက်ကာ သရုပ်ပြသင်ကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခွက်ထိုး ခွက်လန် ဟာသ - ငွေကြည်
12/29/2013 12:15:00 AM funny
စာအုပ်အမည် - ခွက်ထိုး ခွက်လန် ဟာသ
စာရေးသူအမည် - ငွေကြည်
စာအမျိုးအစား - ကာတွန်း၊ ဟာသ
Sex coffee ညစ်ညမ်းလက်ဖက်ရည်၊ လေဒီကော်ဖီ
12/29/2013 12:00:00 AM health-news
Sex Coffee (XS-X0020-D) ဒါကိုတော့ ကြောညာသူတွေက Superior Brazilian coffee ဘရာဇီးကော်ဖီအပြင်းစားလို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Fast thawing tea powder အပြော့စားလက်ဖက်ရည်လို့လဲ စာထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
အထဲမှာပါတာတွေကတော့ (၁) သကြားအဖြူမှုံ နဲ့ (၂) အမျိုးသမီးများစိတ်ကို တွန်းအားပြောင်းစေနိုင်တဲ့ဓါတ်လည်း ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကိုသောက်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး၊ အမျိုးသမီးဟာ ဖြေးဖြေးချင်း ဒါတွေဖြစ်လာမယ်။
• Polypnoea အသက်ရှူမြန်လာမယ်၊
• Vagina itches မိန်မကိုယ်ယားယံလာမယ်၊
• Breast inflates ရင်သားထွားလာမယ်၊
• Cloudy water jet stream အင်္ဂါစိုစွပ်လာမယ်၊
• Sexual intercourse anxiously with the opposite sex ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှိသူနဲ့ အတူနေချင်စိတ်တွေပြင်းပြလာမယ်။
• Spends together with own sexual partner သူ့အဖေါ်နဲ့ အတူတူ အကြာကြီး ချစ်စခန်းဖွင့်နေလိမ့်မယ်။
၁။ ဒါဟာ အကြင်လင်မယားတွေသာသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသာမသုံးရင် ဥပဒေနဲ့မညီတာတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
၂။ အမျိုးသမီး (ကြီး) တွေမှာ ဗဂျိုင်းနား ခြောက်နေတာနဲ့ လိင်စိတ် ရှိသင့်တာထက် နည်းနေတာဆိုရင် သုံးနိုင်တယ်။ ဥပမာ သွေးဆုံးချိန်၊ ကလေးမီဖွါးပြီး စိတ်အခြေနေပြောင်းချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။
ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ။ တထုပ်ကို ရေနွေးပူပူ ၁ဝဝ စီစီ (မယ်လ်) မှာဖျော်ပါ။ တထုပ်ထက်ပိုမသုံးပါနဲ့။ ကပ်ဘူးတခုမှာ 15000mg စီပါတဲ့5ထုပ် 8 ခုပါတယ်။ ထုပ်လုပ်ပြီးနောက် ၃ နှစ်အတွင်းသုံးနိုင်တယ်။
Lady Coffee လေဒီကော်ဖီ
အရသာထူးကဲပြီး အကြာကြီးစွဲစေတယ်။ စိတ်ဖြေနားနေနိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ အမေရိကားကလာတဲ့ကော်ဖီထဲမှာ တရုပ်ကလာတဲ့ ရိုးရာဆေးရောထားပါသတဲ့။ ဗီတာမင်တွေ၊ ဓါတ်ဆားတွေ၊ အာဟာရဓါတ်တွေပါတယ်လို့ ကြော်ညာပါတယ်။ မ-ဟော်မုန်း (အီစထိုဂျင်) ပါတယ်လို့လဲဖတ်ရပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရွယ်ရလာရင် နည်းလာတယ်။ သွေးဆုံးရင် သိသိသာတယ်။ အကောင်းလဲဖြစ်စေပြီး အဆိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်တာ သတိပြုပါ။
1. Lead to enhance sexual desire လိင်စိတ်ပိုစေမည်၊
2. Increse the pleasure and excitement သာယာမှု၊ စိတ်တက်ကြွမှုကဲစေမည်၊
3. The ability to extend the high tide အထွတ်အထိပ်ကာလ ကြာစေမည်၊
4. To increase capacity စွမ်းဆောင်နိုစွမ်းတိုးစေမည်။
တထုပ်ကို ရေနွေးနဲ့သောက်ရင် နောက် ၁၅-၃ဝ မိန်မှာ အစွမ်းပြမယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းမူးဝေမယ်၊ အိပ်ချင်မယ်။ ဖြေးဖြေးချင်းသောက်တာ ကောင်းတယ်။ ကားမောင်နေတုံး မသောက်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မသောက်ပါနဲ့။ အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါရှိရင် မသောက်ပါနဲ့။
အခုရေးတာတွေဟာ ဆေးကြော်ညာထဲမှာ ပါတာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်တို့လို) ဆရာဝန်တွေက အာမမခံပါခင်ဗျား။ ဒီလိုမျိုး ဆေးဆိုတာတွေရှိပါသေးတယ်။ ထပ်ရေးနေရင် ကြောညာထင်နေမှာမို့ မရေးတော့။ မိန်းကလေးများအားလုံး အညာ၊ အညစ် မခံကြရအောင် စားသောက်စရာမှန်သမျှ ပူတာ၊ အေးတာ ဘာမှစိတ်မချရတာကို သိကြပါ။
• SPANISCHE FLIEGE D6, SPANISC FLIEGE D9
• Flower yilly medicine for woman
• Ant King - sex medicine for woman
• Gold flysex medicine for woman စတာတွေက ဆေးမှုံ့၊ ဆေးတောင့်၊ ဆေးအဆီတွေဆိုပြီး လာတယ်။ အရောင်မပါ၊ အနံ့အထွက်ဘူး။ တချို့က အရေပြားကို သုတ်လိမ်းပေးတာနဲ့ ကိုယ်ထဲဝင်စေတယ်။ ဒီလိုဆေးအားလုံးဟာ မတော်မတရားပြုဘို့အတွက်သာ သုံးကြတယ်။ ဒါကြောင့် အေးအေးပူပူ သူများကတိုက်တဲ့ အစား၊ အသောက်တွေကို လက်မခံသင့်ဘူး။၊ လူချင်းထိပြီး ပွတ်သပ်ပေးတာကအစ ရှောင်ရှားနိုင်ဘို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သင်္ကြန်ကာလတခုတည်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်ဆိုတာ ကာလမရွေး၊ နေရာမရွေးပါခင်ဗျား။